Kenya oo Shabaabnimo u xirtay sadex dumar ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa sheegay iney gacanta ku dhigeen 3 dumar ah , kuwaasoo lagu tuhmayo in xiriir la leeyihiin Alshabaab.
Dumarkaan waxaa lagu xiray magaalada Ceelwaaq oo ku taala xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, sida uu sheegay guddoomiyaha magaalada Mombasa, Nelson Marwa.
Mas’uulkaan ayaa sheegey in saddexda haweenka ah looga shaki qabo in ay ku biiri rabeen Al-Shabaab, isagoo xusay in ay ka soo tageen Mombasa oo ay ku soo wajahnaayeen Soomaaliya.
Labo ka mid ah haweenkaasi oo da’doodu u dhexeysa 20-21 jir waxa ay u dhasheen Kenya, halka haweeneyda saddexaad ay ka soo jeeddo wadanka Tanzania, waxaana ku socda baaritaan.
Gabar magaceeda lagu sheegay Ummul-Khayr Sadir Abdull oo u dhalatay Jaziiradda Zanzibar ayaa la rumeysan yahay iney hogaaminaysay saddexdaasi dumarka ah, halka magacayada labada kale lagu kala sheegay Maryam Said Aboud iyo Khadija Abubakar Abdulkadir.
Labo qoys oo ku nool magaalada Malindi oo 120 km u jirta magaalada Mombasa ayaa sheegay in booliska ay u sheegeen in ay muddo maalmo ah la’aayeen gabdhahooda, kaddibna lagu wargeliyay in gacanta lagu dhigay Jimcihi.
Labo ka tirsan gabdhaha ayaa la rumaysan yahay in ay wax ka baranayeen kaamacad ku taalla magaalada Mombasa, halka gabadha saddexaad oo u dhalatay dalka Tanzania ay deeq waxbarasho ka heshay jaamacadda caalamiga ah ee Khartoum ee dalka Sudan.
Laamaha ammaanka Kenya ayaa sheegay in dadaka ugu badan oo isku dayaya in ay ku biiraan Alshabaab ay ka baxayaan magaalooyinka, Mombasa, Malinda, iyo kuwa kale.
Booliska Kenya ayaa sheegay inay xabsiyada u taxaabeen 54 ruux oo laga shakisanyahay iney u gudbi rabeen Soomaaliya si ay ugu biiraan Alshabaab.